Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Famerenan'ny Beyond Fest 2021: 'New York Ninja'
Famerenan'ny Beyond Fest 2021: 'New York Ninja'
Sarimihetsika iray very, tsy vita ary patchwork tamin'ny taona 80 no niova ho kilasika taorian'ny maoderina.
by Jacob Davison Oktobra 30, 2021
by Jacob Davison Oktobra 30, 2021 531 hevitra
Ny taona 80 dia nalaza tamin'ny fironan'ny sarimihetsika sy ny lamaody. Ny boom slasher, sarimihetsika momba ny fanatanjahantena, ary mazava ho azy: ninjas. Zatovo Mutant Sokatra Ninja, GI Joe, Ninja III: Ny Fanjakazakana, ary ny maro hafa dia nanolotra hetsika mifototra amin'ny ninja isan-karazany, ary koa ireo seho sy sarimihetsika isan-karazany izay nandraisan'izy ireo kiraro noho ny lazany. Ahoana anefa raha hilaza aminao aho fa angamba ny tantara ninja farany tamin'ny taona 80 dia mbola tsy hita akory… hatramin'izao.
John (John Liu) dia teknisianina momba ny fanamafisam-peo ao amin'ny tobim-baovaon'ny New York City ary ny fiainany manontolo no mialoha azy. Asa tsy tapaka, vady mahafatifaty, zaza iray eny an-dalana, ary ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Saingy rehefa mamono ny malalany teny an-dalambe ireo jiolahy mitafy akanjo sy mpanao trafika, ary tsy manan-kery hanara-dia azy ireo ny lalàna, dia tsy misy ianteherana afa-tsy ny tenany… sy ny fahaizany haiady! Lasa ilay New York Ninja mitondra ny lohateny hoe izy, dia nanapa-kevitra ny haka shuriken ho amin'ny heloka bevava amin'ny fiainana ambany iray. Tsy ho ela dia lasa lasibatry ny mpamono Plutonium ratsy fanahy nitarika ny fandidiana sy ny ankiziny, ho tafita velona ve izy sa ho lo ny Big Apple?
Ny tantara ao ambadika NY Ninja tena mahavariana toy ny sarimihetsika mihitsy, voasambotra daholo Ampidiro indray ny New York Ninja fanadihadiana mivelatra amin'ny famoahana blu-ray ao ambadika sy ny fanatanterahana ny sarimihetsika araka ny fantatsika ankehitriny. Amin'ny ankapobeny, John Liu dia mpanao haiady sy mpilalao sarimihetsika izay nitifitra ilay sarimihetsika tany New York tamin'ny fiandohan'ny taona 80. Famoronana sarimihetsika amin'ny fomba mpiady anaty akata miaraka amin'ny tetibola ambany no nosintonina tamin'ny farany ary tsy vita mihitsy ilay sarimihetsika. Ny zo sy ny singa amin'ny sarimihetsika mitsambikina avy ao amin'ny TROMA mandra-pahafatiny teo am-pelatanan'ny tahirin-tsarimihetsika sy ny mari-pamantarana horonantsary Vinegar Syndrome. Notarihin'i Kurtis Spieler, nandalo ny asa goavana izy ireo tamin'ny fanangonana ny sary ho tantara azo vakiana, namerina sy nanafoana ny feo, feo ary mozika rehetra, ary indrindra indrindra; mampifaly azy. Ary mahafinaritra izany!
Sambatra aho nitory NY Ninja navoaka tamin'ny mpihaino tsy nampoizina tao amin'ny Beyond Fest 2021, ary tena sarimihetsika ho an'ny vahoaka izany. Ny fampiratiana tsirairay avy amin'ny olona manatri-maso voatafika ny Warriors Jiolahy manana endrika, The New York Ninja manambara ny entam-barotra marika kokoa, ary ny The Plutonium Killer's… nahazo valiny mafonja avy amin'ny vahoaka ny zava-drehetra ary nahasarika anay. Ny mpilalao dub dia kintana rehetra avy amin'ny zoro rehetra amin'ny sinema genre, avy amin'i Don 'The Dragon' Wilson, Cynthia Rothrock, Michael Berrymen sy ny maro hafa, azo antoka fa handre feo mahazatra avy amin'ny karazan'olona marobe ianao. NY Ninja.
Sahala amin'ireo sarimihetsika tsy voasokajy hita indray sy sisin-tany toy ny Ny Miami Connection, The Visitor, ary Ilay mpanandro, NY Ninja dia sarimihetsika manohitra ny saina. Ity tranga ity indrindra, Frankenstein toa ny ezaka amin'ny fametahana sarimihetsika mihetsika tsy misy dikany mba hamoronana zava-baovao tanteraka. Porofon'ny toe-tsain'ny mpanao sarimihetsika izany ary tena mahafinaritra tokoa ny sarimihetsika! Miaraka amin'ny tantarany, NY Ninja dia sokajy manokana ary tena iray amin'ny karazany. Fanandramana sarimihetsika mahazatra sy marina azo antoka fa tsy azo averina. Raha hitanao dia ho tia koa ianao NY Ninja!
NY Ninja havoaka amin'ny blu-ray avy amin'ny Vinegar Syndrome amin'ny 1 Novambra.